Simannaan ABO maaliif barbaachise? – Oromedia
Home » Odeeffannoo » Oduu » Simannaan ABO maaliif barbaachise?
Simannaan ABO maaliif barbaachise?
October 21, 2018 @oromedia 0 Odeeffannoo, Oduu,
By Dhaabasaa Waaqajiraa
Simannaan waan darbeef, hiree galateeffannaa dha; waan har’aaf hiree walargaa dha; waan egereef immoo hiree karoorfannaa dha. Kaayyoon Simannaa akkuam sagantichaatti addadda ta’uu mala. Garuu, simannaan kamiyyuu kaayyoo qopheeffamuuf qaba. Simannaan ABO yeroo amma gaggeeffamu, fakkeenyaaf, Simannaa waan egereef hundee gaarii yayyabaa jiruu dha. Simannaan kun ABOfis ummataafis muuxannoo gaarii akka qabaatuu shakkiin hin jiru.
Haata’utii, Simannaan ABO kun maaliif barbaachise?
Qabsoon nagaa ifaan eegaluu beeksisuu dha.
ABOn waggaa dheeraaf dhoksaan hojii qabsoo gaggeessaa ture. Kun miseensota ABO fi qabsicha balaa irraa eeguuf kan taasifame ture. Haala amma argameen garuu, hireen ifaan qabsoo siyaasaa gaggeessuu mul’ateera. Kanaaf, simannaan ammaa hojiin qabsoo kun ifaan ummata keessatti gadbahuu dha.
Hoggantoota ABO ummatatti mul’isuu dha
Gama kaaniin, ummatichii fi hogganooti dhaabaa yeroo dheeraaf addaan bahanii turan. Qabsaa’onni ABO haala akkaan rakkisaa keessatti qabsicha gaggeessaa waan turaniif, ummata biratti ifaan kan beekaman xiqqoo dha. Yeroo ammaa immoo ummata biratti dhaabichaa fi miseenosta dhaabichaa beeksisuun barbaachisaa dha. Kanaaf, simannaan ammaa kun hogagnoota, qondaaltotaa fi miseensota dhaabichaa ummata bal’aatti beeksisuuf kan akeekamee dha.
Hariiroo ifaa jabeessuu dha.
ABOn haga yoonaatti qabsoo dhoksaa karaa maadhee gaggeessaa ture; hariiroo fi walitti dhufeenyi ummata waliin ture, kan caasaa harka lafa jalaan gaggeefafmaa turee dha. ABOn jiraachuu malee, akkamiin akka dhaabichi hojjatu hawaasti ifatti hin beeku. Carraan simannaa kun immoo hariiroo ABO fi ummata Oromoo gidduu jiru ifatti baasuu dha. Ummatis akka caasaa dhaabichaa ifatti beekee hariiroo ifaa qabaatuu fi ifaan hojjatu godha.
Caasaa ABO babal’isuu dha.
Caasaan ABO kanaan duraa kan dhoksaan hojjataa ture. Caasaan kun dhoksaan waan hojjataa tureef, bal’aa miti. Hireen ammaa immoo caasicha bal’isuuf mijajtaa dha. Kanaaf, simannaan ammaa caasaa dhaabichaa bakka duraan hin geenye dhaqqabsiisuu fi ummata keessatti diriirsuuf gargaara. Ummatis dhaabichaan walitti dhafeenya tolfata. Kaayyoon simannaa kun Caasaa dhaabichaa ummata keessatti bal’isuu dha.
Fedhii fi gaaffii ummataa beekuu dha.
Hojiin ABO dantaa ummata Oromoo kabachiisuu dha. Haata’uutii, hojiin dhaabichaa fedhii ummataa waliin akka deemu qorachuun ni barbaachisa. Kun immoo fedhiin ummataa fi hojiin dhaabaa akka walsimu taasisa. Kun kan ittiin beekamu, yeroo ummaticha bal’aa waliin walitti dhufeenya godhanii dha. Hiree walitti dhufeenyaa kana irratti marii fi dubbii godhamu waan barbaadamu akeeka; fedhii fi gaaffii ummataa beeksisa. Simannaan kun, waan ummati fedhu beekanii, waan egeree karoorsuuf gargaara. Yeroon simannaa kun, kanaaf, yeroo fedhii fi gaaffiin ummataa itti beekamuu dha.
Simannaan walargaa dha; walbarnoota gaariidhas. Yeroo simannaatti waan umamnni barbaadu beekuufis hireen uumamu gaarii dha. Ummanni tokko waan jaalatuu fi dharraa itti qabu irratti fedhii guddaa agarsiisa waan ta’eef, simannaa ABO ammaa kanaan gaaffii fi fedhiin ummataa ifatti akk beekamaa jira. Kun immoo dhaabichaaf hireedhas, qormaata guddaa dhas. Hireen fedhii fi gaaffii ummataa beekuuf carraan argamuu dha. Qormaanni immoo fedhii fi gaaffii umamtaa beekame, hojiitti hiikuu danda’uudha. Kun dhaabichi akka waan dursuu qabu, beekee sagantaa fi karooraan hojjatu dirqama irratti gata; dhaabichis ummata biratti yeroon itti qoramuu eegalus, yeroo kana irraa kaasee ti. Kun immoo humnaa fi dandeettii ofii madaala keessa galchuun hojii qabatamaa fi bu’a qabeessa hojjachuun kan mirkanaa’uu dha.
Previous: ESAT: Dhimma Keenyaa Bafqaaduu Morodaa with Obbo Dhaabasaa Waaqjiraa
Next: Waltahiinsa: Tokko ala dhaabanii, tokko mana kaayanii guddachuun hin ta’u.